'झुम्की' चलचित्र समिक्षा | Hamro Patro
चलचित्र 'झुम्की' अडियो समिक्षा
माओवादी द्धन्दकालिन परिवेशमा आधारित चलचित्र झुम्की विशुद्ध एउटा पश्चिमे थारु वस्तीको कथा हो । सफल चलचित्र 'कवड्डी' र 'कवड्डी कवड्डी'का प्रायः सबै हस्तीकरुको नाम जोडिएको यो चलचित्र यस हप्ताको वक्स अफिस रिलिज हो । आउनुहोस वहुप्रतिक्षीत चलचित्र झुम्कीको समिक्षातर्फ लागाैं ।
चलचित्र 'झुम्की'को कथा एउटा रहस्यमय हत्यामा शंकास्पद हत्याका अभियूक्त देवकी (रिश्मा गुरुङ्ग) र गोकुल भट्ट (मनोज आरसी) को कथा हो । इन्सपेक्टरको भूमीकामा रहेका दयाहाङ्ग राइले छानवीनसंग सम्बन्धित गतिविध गरेका देखिन्छन् । हत्यापछी बेग्ला बेग्लै रुपमा फरार भएका रिश्मा र मनोजबिच बाटोमा भेटघाट हुन्छ र त्यहि पटके भेटको फलस्वरूप दुवै एकअर्काको मायामा पर्दछन् । यो हत्याका बारेमा रिश्मालाई सबै थाहा हुन्छ र यस्तोमा दुवै फेरी एकपटक दाङ्ग पुग्छन जहाँ उनिहरुबिच प्रेम शुरुभएको थियो । उता दयाहाङ्ग दुवैको खोजिमा निस्कन्छन्, यस्तोमा आखिर यो हत्याको रहस्या के हो ? रिश्माले किन खुलेर मनोजको प्रेम स्वीकार गर्न सक्दिनन, दुवैबिचको प्रेम आखिर कहाँसम्म पुग्छ त ? यसकालागि यहाँहरुले चलचित्र 'झुम्की' हेर्न हलसम्म पुग्नैपर्ने हुन्छ ।
दयाहाङ्ग राइले प्रहरी इन्सपेक्टरको भूमिकालाई न्याय दिएका छन, अनुसन्धानसंग सम्बन्धित प्रसंगहरूमा उनका अनुहारका हाउभाउले समेत चलचित्रको सस्पेन्स र अनुसन्धानप्रतिको गम्भिरतालार्इ राम्ररी उतारेका छन् । उनी दर्शकलाई हँसाउन कहिल्यै चुक्दैनन भने मनोज आरसी पनि उत्तिकै उत्कृष्ट छन । कथाको भार उनले उत्कृष्ट तरिकाले बोकेका छन् भने रिश्मा गुरुङ्ग 'कवड्डी' र 'कवड्डी कवड्डी' पछि भिन्न गेटअपमा देखिइएकी छिन् । तर उनको गेटअप जस्तै उनको क्यारेक्टर भने भिन्न छैन । उनले थारु भाषा बोलेको त्यती सुहाएको भने छैन । यी बाहेक चलचित्रमा प्रमोद अग्रहरी र भोलाराज सापकोटा छन र दुवैको अभिनय सशक्त छ । प्रमोद अग्रहरी चलचित्रको अधिकांश ठाउमा सिन स्टिलर बनेका छन । चलचित्रमा झुम्कीको क्यारेक्टरमा मलिना जोशी छोटो समयकालागी देखिन्छिन र उन्ले आफ्नो उत्कृष्ट लुक्स र थरुनी हाउभाउ र बोलीले सबैलाई प्रभाव पार्दछिन ।
एक साता अघि दर्शकलाई क्लास फिल्म पस्किन खोज्ने चलचित्र 'गाँठो'को असफल प्रयास आलोकाँचो प्रयासका रुपमा तूहिएर गएको छ । चलचित्रप्रेमीले 'गाँठो'लाई सिध्धै अस्विकार गरेपनि यो साता 'झुम्की'ले क्लासको चलचित्रका रुपमा आफूलाई पस्केको छ । चलचित्रको पेस थोरै विस्तारै भएकाले सिङ्गल स्क्रिनको दर्शकहरुकालार्इ यो चलचित्र अाक्रमक नलाग्न सक्ला तर धैर्य राखेर उत्कृष्ट सिनेमा हेर्न रुचाउने सिनेप्रेमीलाई 'झुम्की' पर्फेक्ट चलचित्र हो । इङगेजिंग प्लट, उत्कृष्ट परफरमेन्स र ब्याकग्राउन्ड स्कोर अनि अर्को उल्लेख गर्नैपर्ने कुरा उत्कृष्ट क्लाइमेक्श 'झुम्की'को प्रमुख आकर्षण हो ।
यो समिक्षा मन्दिप गाैतमको सहयोगमा सुयोग ढकालले तयार पार्नुभएको ।